Sabti 11 Bisha Sagaalaad 2021
Shaaha Shaaha Waxaa dhiirigeliyay terrace terrace ee dabiiciga ah, Wavy waa shaah shaaha kuu keenaya waayo-aragnimo shaaha u gaar ah. Xeerarka hal-abuurka leh ayaa loo soo saaray si ay ugu habboon yihiin gacmahaaga. Marka aad koobka ku xidho calaacalaha gacmahaaga, waxaad ogaan doontaa in u soo ifbaxo sida ubax biyo ah oo kuu horseedi doona daqiiqad deggan.
Dahabka Naqshadda Jeegaanta ee aan naqshadeeyo waxay sheegaysaa dareenkayga. Waxay ii metelaysaa farshaxan, naqshadeeye iyo waliba shaqsi ahaan. Waxa dhaliyay Poseidon waxaa la dejiyay saacadihii ugu madhnaa ee noloshayda markii aan dareemay cabsi, nugul iyo u baahan badbaadin. Ugu horreyn waxaan u qaabeeyey ururintan in loo isticmaalo is-difaaca. In kasta oo fikirkaas uu ku xumaaday mashruucan oo dhan, weli wuu jiraa. Poseidon (ilaaha badda iyo "Dhul-Shaker," ee dhulgariirrada taariikh nololeedkii Greek) waa ururintaydii ugu horreysay ee rasmi ah oo loogu talagalay haweenka xoogga leh, oo loogu talagalay inay siiso kuwa weheliya dareenka awoodda iyo kalsoonida.
Sumadaha Stumbras 'The Classic vodka aruurinta waxay soo nooleysaa dhaqankii vodka hore ee Lithuania ee samaynta caadooyinka. Naqshadeynta ayaa ka dhigaysa badeecad duug ah oo duug ah oo dhow oo la xiriirta macaamiisha waqtigan. Dhalada muraayadda cagaaran, taariikho muhiim u ah samaynta vodka Lithuania, halyeeyada oo ku saleysan xaqiiqooyinka dhabta ah, iyo kuwa raaxada leh, faahfaahinta indhaha-qabashada ah - foomka goynta go'ay ee lagu xasuusto sawirrada duugga ah, baarka hoose ee la dulsaaray ee hoosta kaasoo dhammaystiraya astaamaha sumadda caadiga ah, iyo Farta iyo midabada kuwaas oo gudbinaya aqoonsiga sumad-hoosaad kasta - dhammaantood waxay ka dhigayaan ururinta vodka dhaqameedku mid aan shardi ahayn oo xiiso leh.
Kalandarka Waxaan idinka dhiseynaa magaalooyin. Farriinta ay soo gudbiso NTT East Japan ee Gudbinta Xayeysiinta Shirkadaha waxaa lagu muujiyey jadwalka miiska. Qeybta kore ee waraaqaha kal-kalandarka waa goyn ka kooban dhismayaal midabo leh oo go'yaal isku dhafan ayaa ah hal magaalo faraxsan. Waa jadwalka taariikhda ee mid ku raaxeysan kara beddelida muuqaalka xariiqda dhismayaasha bil kasta waxaana kaa buuxinaya dareen aad ku faraxdo sannadka oo dhan.
Kalandarka Kani waa jadwalka miiska ee lagu sameeyay qaabeynta naqshadaynta oo ay kujiraan mowduucyo xilli xilli ah oo ku saabsan embossing fiican. Muuqaalka naqshada ayaa ah marka la muujiyo, mowduucyada xilliyeed waxaa lagu dejiyaa xagal 30 darajo ah si loogu daawado. Foomkan cusub wuxuu muujinayaa NTT COMWARE ee sheekada cusub ee abuurista fikradaha cusub. Maskaxda waxaa loo siiyaa kalandarka shaqeynta jaangooyo qoraal oo ku filan iyo xariiqyo la xukumay. Way ku wanaagsantahay aragtida deg degga ah iyo fududaanta in la adeegsado, asal ahaan asal ahaan ka soocda jadwalka kale.
Dahabku Fikradda aasaasiga ah ee odyssey by monomer wuxuu ku lug leeyahay daboolida muuqaalo, qaab joomatari oo leh maqaar qaabaysan. Tan waxaa ka dhalanaysa isweydaarsiga caddeynta iyo dhalanrog, daah furnaanta iyo qarinta. Dhamaan qaababka joomatariiga iyo qaababka ayaa lagu dari karaa iyadoo la doono, kala duwan oo lagu dhammayn karo isugeynta. Fikraddan xiisaha leh, ee fudud ayaa u oggolaaneysa abuurista qaab naqshad leh oo aan loo dulqaadan karin, oo si qumman loo waafajinayo fursadaha ay bixiyaan soo-saare deg deg ah (daabacaadda 3D), maadaama macaamil kastaa uu yeelan karo shay gabi ahaanba shakhsiyan ah iyo alaab gaar ah oo la soo saaray (booqo: www.monomer. eu-shop).
Shaaha Shaaha Dahabka Sumadaha Kalandarka Kalandarka Dahabku